Shidaalka gobolka Soomaalida Itoobiya oo boob lagu hayo | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkad Mareykan ah ayaa heshiis gaaraya $3.6 billion la gashay Wasaaradda Batroolka Itoobiya, laakiin baaritaan ay sameysay Quartz Africa ayaa lagu ogaaday in ay laaluush badan ku bixiysay inay mashruucan maamusho.
ADDIS ABABA - Shirkad fadhigeedu yahay Virginia, Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay boob ku hayso shidaalka ku jira dhulka gobolka Soomaalida Itoobiya, iyadoo laaluush badan ku bixiysay inay mashruucan maamusho.
Nebiyu Getachew, oo 48 jir ah, kaasoo ah aas-aasaha Shirkada ayaa April 2020 heshiis ku kacaya $3.6 billion la gashay Wasaaradda Batroolka Itoobiya, si ay uga dhisto gobolka wershad shidaalka sifeysa.
Shirkaddan oo lagu magacaabo GreenComm ma lahan khibrad ama khibrad shidaalka la xariira, waxaana laga reebay keydka macluumaadka ee shirkadda Virginia laba jeer, iyadoo xitaa iska bixin waysay khidmadaha diiwaangelinta.
Xogaha la helayo waxay muujinayaan in heshiiska GreenComm iyo Wasaaradda Batroolka ee Itoobiya yahay mid mugdi badan ku jiro, islamarkaana la doonayo in si sharci darro ah loogula baxo Shidaalka.
Muddo tobanaan sano, Itoobiya waxay raadinaysay inay soo saarto shidaalka badan, ee ku jira dhulka dowlad degaanka Soomaalida, oo lagu qiyaasay inuu gaarayo 8 tirilyan oo litir oo keyd saliid ceyriin ah.
Laakiin rajooyinka soo saaridda ayaa lasoo dersay dhibaatooyin badan, oo ay ka mid yihiin in gobolka Soomaaliyeed ee saliidda hodanka ku ah ay ka dagaalamayeen kooxo fallaago hubaysan tan iyo 1980.
Sanadihii la soo dhaafay, rabshadaha ka jiray gobolka ayaa yaraaday laakiin maamul xumo, heshiisyo shaki aan sax ahayn oo shirkado shisheeye laga galayay iyo musuqmaasuq ayaa caqabad ku ah himilada soo saarista shidaalka.
Waddanku wali si dhab ah ugama faa'iideysto kheyraadkiisa saliida oo muddo dheer lagu tilmaamayay inay diyaar u yahay in lasoo saaro, si dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha dalka oo hoos u socday.
La'aanta sharci fulin iyo habka turxaan bixinta oo liidata waxay noqdeen waxyaabaha hor-istaagan soo saaarida batroolka Itoobiya oo ay ka faa'iideysteen ganacsato caalami ah oo aan lahayd khibrad fiican.
Ma ahan Itoobiya oo kaliya dalalka gobolka, ee Shirkadaha Shisheeye sida suuqa madow looga iibinayo shidaalkooda. Soomaaliya, oo ay ka jirto isla xisaabtan la’aan ayaa khayraadkeeda la xaraashayaa.
Horey ayay Keydmedia Online warbixino dhowr ah uga soo qortay xaraashka dowladda Farmaajo ku iibinayso ruqasadaha shidaal baarista, waxayna madaxda ku sugan Villa Somalia doonayaan inay mashruucan ka sameeyaan dhaqaale ay doorashadda kusoo galaan.
Farmaajo ayaa ka iibiyay Shirkadaha Shell, ExxonMobil, Eni iyo Chevron 7 baloog oo kala ah 152, 153, 164, 165, 177, 178 iyo 204, waxaana lacagta lagu kala wareejistay Turkiga, waxaana Farmaajo usoo qaadey malaayiinka doolar Wasiiradda Ganacsiga iyo Batroolka.
Kadib baaris la sameeyay, oo xogtiisa London lagu soo bandhigay February 2020, ayaa muujinaysa in la xaqiijiyay 15 baloog oo ku yaalla dhanka xeebaha ay ku jiraan shidaal gaaraya 30 billion oo foosto.
Shirkadaha ajnabiga waxay arkeen baahida dalalka Geeska Afrika iyo musuq-maasuqa hogaamiyeyaashooda, oo kursiga ugu fariistay inay dhaqaale ka sameeyaan saxiixa heshiisyadda khayraadka dabiiciga.